Milateriga Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka Awdheegle & Mubaarak – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Milateriga Soomaaliya oo ka hadlay dagaalka Awdheegle & Mubaarak
15th May 2015 A warsame Af Soomaali 0
Mareeg.com: Abaanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal C/rasaaq Khaliif Cilmi ayaa sheegay ka hadlay dahaal Alshabaab saaka ku qaadeen deegaannada Awdheegle iyo Mubaarak oo ka tirsan Shabeellaha Hoose.
Jeneraal C/rasaaq Khaliif Cilmi ayaa xaqiijiyey in Alshabaab ay saaka weerar ku soo qaadeen deegaanada Aw-dheegle iyo Mubaarak, halkaas oo horey fadhiisan ugu aheyd ciidanka AMISOM hase yeeshee ay kal hore ka guureen.
Abaanduulaha oo la hadlay warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay ka hor tageen weerarka Alshabaab, isla markaana ku celiyaan deegaanka Toora Toorow oo ay ka soo duulaan tageen, sida uu yiri.
Hase ahaatee, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo maanta la hadlay BBC ayaa sheegay in Alshabaab la wareegeen Awdheegle iyo Mubaarak.
Jeneraalka ayaa sheegay in ciidanka dowladda laga dilay 1 askari, wuxuuna yiri “Anaga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed hal askari ayaa naga shahiiday hal askari oo kalena waa naga dhaawacmay, ayaga xagoodana sadex ayaa ka dhimatay iyo dhaawacyo kale waxaana lagu celiyay meeshii ay ka yimaadeen” ayuu yiri Abaanduulaha Ciidanka Xoogga.
Abaanduulaha ayaa tilmaamay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka deegaanada Aw-dheegle iyo Mubaarak ay xaqiijiyeen amniga goobihii saaka dagaalada ay ka dhaceen isla markaana ciidanka xooga dalka ay guul weyn ay ka gaareen dagaalkii Alshabaab soo qaadeen.
“Waxaa lagu jiraa qorshe ballaaran oo looga hortagayo waxyaabahaasi laguna xoreyn doona dalka, dibna loo hanan doona insha’alahu tacaalaa, shacabka Soomaaliyeed dhowaan waxaa ay maqli doonaan wax dhagahooda ay ku farxaan” ayuu yiri Jen. C/rasaaq.
Warar madax bananaan oo laga helayo deegaannada Awdheegle iyo Mubaarak ayaa sheegay in labadaas deegaan ay ku sugan yihiin ciidamada Alshabaab oo saaka la wareegay.
Alshabaab oo dib ula wareegay Aw-dheegele iyo Mubaarak oo ka tirsan Shabeellaha Hoose
Madaxweynaha Burundi oo awood u helay inuu ku laabto dalkiisa